अभिनेत्री सुरक्षा पन्तको भैली अनुभव - अनुभव - साप्ताहिक
अभिनेत्री सुरक्षा पन्तको भैली अनुभव
मेरो घर बुटवल हो । हामी चार जना दिदी–बहिनी साह्रै मिल्छौं । मेरी दिदी वन्दना र बहिनीहरू शिक्षा र रक्षासँग भेट्दा अहिले पनि समय बितेको पत्तो हुँदैन । हाम्रो बुवा अनुशासन प्रिय हुनुहुन्छ । उहाँलाई हामीले भैली खेल्न गएको मन पर्दैनथ्यो । त्यति बेला म सात कक्षामा थिएँ ।
सानैदेखि म नाच्न भने पछि हुरुक्कै हुन्थेँ र राम्रो नाच्थे पनि । बुवालाई भने म त्यसरी भैलीमा नाचेको मन पर्दैनथ्यो । तिहारमा हामीलाई पहिल्यै उहाँको निर्देश हुन्थ्यो कि साँझ परेपछि कोही बाहिर जाने होइन, तर मनले कहाँ मान्थ्यो र ? आमा भान्छाको काममा व्यस्त हुने र बुवाचाहिँ साथीहरूसँग तास खेल्न घर बाहिर जाने । साँझ परेपछि हामी त्यही मौका छोप्थ्यौं । कसैलाई थाहा नदिई बिरालो चालमा हामी बाहिर निस्कन्थ्यौं र दुई–तीन घण्टा भैली खेली खुसुक्क घर आएर सुत्यौं । सायद आमालाई हाम्रो त्यो कुरा थाहा हुन्थ्यो, तर केही भन्नुहुन्नथ्यो । भैली खेल्न गएको हरेक घरमा नाचेबापत मलाई छुट्टै पैसा दिइन्थ्यो ।
त्यसैले पनि मलाई विशेष रमाइलो लाग्थ्यो । एक वर्षको तिहारमा बुवा तास खेलेर छिट्टै घर आउनु भएछ । हामी पैसा बटुलेर खुसी हुँदै नौ बजेतिर घरमा छिर्दा त बुवा आइसक्नुभएको रहेछ । अनि त के चाहियो र ? पिटाइ नखाए पनि गाली भने मज्जाले खाइयो । अहिले भने म तिहारमा अरूले भैली खेलेको हेर्दै ती दिनहरू सम्झन्छु ।
प्रकाशित :आश्विन ३१, २०७४